Tuesday 31st March 2020 14:45:31 in Wararkii Maanta by Tafatiraha Guud
Cabdi Fataax Maxamed Qaaje waa kalkaaliye caafimaad oo dagan dalka Finland waxaana loo sheegay in uu qabo caabuqa Corona, balse markii dambe haddana laga waayay.
Cabdi Fatax oo BBC u waramay ayaa sheegay in uu dareemay calaamado sida hargabka ka dibna uu isbataalka aaday si cudurka looga baaro.
"Cudurkan iskuma aanan ogayn oo waxaan u haystay in uu Hargab caadi yahay, waxaana la i mariyay baaritaan caafimaad oo qaatay wax ka yar 24 saacadood, waxay isoo waceen Jimcihii waxayna ii sheegeen inaan cudurka qabo, ayuu yiri", Cabdi Fatax.
Cabdi Fataax Maxamed Qaaje ayaa sheegay in markii loo sheegay in uu qabo caabuqa uu walwal dareemay,
"Cabsidaa way iska wada jirtay laakiin waxaan dareemay walwal, ayuu intaa ku daray".
Sidee markii dambe lagu ogaaday inuusan qabin?
Cabdi Fataax Maxamed Qaaje waxaa uu sheegay in markii maalmo ay ka soo wareegtay natiijadii hore ee ahayd in cudurka laga helay mar kale ay dhakhaatiirta u yeereen si loo baaro.
Waxaa uu intaa ku daray in mar labaad la mariyay baaritaan cudurka Corona ah, balse loo sheegay in uusan qabin.
"Sabtidii ayay ii waceen waxayna i dhaheen baaritaan labaad ayaan kaa qaadaynaa taasi oo ah mid degdeg ah, sidaa aawadeed mid labaad ayay iga qaadeen waxayna iigu soo jawaabeen 10 saacadood gudahood waana la iga waayay, "ayuu yiri Cabdi Fataax.
Talada uu u soo jeediyay Soomaalida.
Cabdi Fataax ayaa sheegay in loo baahan yahay dadka cudurka qaba in aysan dadka u qarin oo ay u sheegaan.
"Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u sheego, waxa alle keeno way iska qadaran yihiin, fayraskan Corona cabsidiisa way badan tahay waa kawada warqabnaa laakiin waxaa muhim ah inaan isu qarin oo qofka qaba uu u sheego bulshada kale ee Soomaaliyeed," ayuu yiri Cabdi fatax.
Waxaa uu xusay in ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo leh calaamadihii cudurka Corona hadana aanan aadayn xarumaha caafimaadka si looga baaro.
"Tusaale ahaan maalmihii aniga aan dareemayay calaamadaha hargabkan nafsadeyda waxaan galiyay guriga inaan iska joogo marka dad badan oo Soomaali ah o aan is wacnay oo magaalada wareegayo oo calaamadihii aan lahaa markaas hadda iyagu leh ayaa jira magaalada si caadi ah u shaqaysanaya markii aad la hadashid dhahaya waxaan qabaa hargab, "ayuu intaa ku daray.
Image caption Sida Khubarada ay sheegeen, illaa 14% boqolkiiba bukaanada ka caafimaada coronavirus, markale way la xanuunsan karaan.
Tanzania Oo Qaab Ka Duwan Dalalka Kale Ula Tacaalaysa Fayraska Korona [Gudaha Ka Akhriso]